Ny tontolo ambanin'ny tany tsara indrindra 10 eto an-tany | Vaovao momba ny dia
Ny tontolo ambanin'ny tany tsara indrindra 10 eto an-tany
Susana Garcia | | General, Tsangatsangana
Matetika isika dia miresaka momba ireo firenena tiantsika hotsidihina, tsangambato, tendrombohitra avo, ala, renirano ary ny tontolo ivelany mahavariana. Nefa aza adino fa indraindray misy izao tontolo izao mahita ambanin'ny tany, miaraka amin'ireo lava-bato izay efa tao nandritra ny an'arivony taona maro izay manafina tsiambaratelo maro. Anio dia hasehonay anao ny Landscape ambanin'ny tany 10 tsara indrindra eto an-tany, miaraka amin'ireo lava-bato tsy mampino amin'ny toerana samihafa.
Ny fitsidihana ireo lava-bato ireo dia tena fahitana, indrindra ho an'ireo mpankafy zohy, izay mandalina ny famoronana lava-bato. lava-bato ambanin'ny tany, ny zavamaniry sy ny biby ao aminy. Misy toerana tsy mampino any ambanin'ny tany izay lasa toerana fitsidihana ilaina any amin'ny fireneny koa aza hadinoina izy ireo. Ho toy ny mankafy ny 'Journey to the Center of the Earth' an'i Jules Verne '.
1 Cave Eisriesenwelt any amin'ny Alpes Austria
2 Zohy Reed Flute any China
3 Zohy Waitomo any Nouvelle Zélande
4 Gua Majlis al Jinn any Oman
5 Lava-bato Skocjan any Slovenia
6 Caverns Carlsbad any New Mexico
7 Lava-bato Kverkfjöll any Islandy
8 Zohy fierena ao Mallorca
9 Zohy Khao Bin any Thailand
Cave Eisriesenwelt any amin'ny Alpes Austria
Manomboka amin'ny zohy izay mivadika ho a fialofana ranomandry, 40 kilometatra monja miala an'i Salzburg any amin'ny Alpes Austria. Izy io dia iray amin'ireo lava-bato mahaliana indrindra, satria ao anaty lava-bato voajanahary dia mampijanona ny rano misy ny onjan-drivotra, ary miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny onja, miempo sy manova ny endriny ity ranomandry ity, noho izany dia ho zava-baovao sy miova hatrany izy io. Misokatra ihany ny lava-bato ireo manomboka amin'ny 1 Mey ka hatramin'ny 26 Oktobra, manakatona amin'ny ririnina, ary ny fizarana voalohany ihany no azon'ny besinimaro na dia miafina 42 kilometatra misy galeria aza izy ireo.
Zohy Reed Flute any China
Ireo no lava-bato mahavariana hita any Guilin, faritra Guanxi, any Sina. Toerana iray izay ahitan'ny mpizahatany maro ny milalao hazavana miaraka amina formaly vatosokay, miaraka amin'ny stalactites sy stalagmites. Seho feno psychedelia ho an'ireo izay te-hahita ireo lava-bato amin'ny fomba fijery hafa.
Zohy Waitomo any Nouvelle Zélande
Eo ambanin'ny tontolo maitso ao Waitomo dia ahitantsika lava-bato ary na dia ny farihy ambanin'ny tany amin'ireo lava-bato ireo izay nateraky ny fandalàn'ny onjan-drano ambanin'ny tany namakivak'ilay vatosokay. Misongadina izy ireo satria ao amin'izy ireo no ahitantsika tafika iray manontolo fireflies teratany izay mipetraka ao anaty lava-bato. Rehefa maty ny jiro dia afaka mahita seho tsy mampino miaraka amin'ny afomanga manazava ny zava-drehetra ianao.
Gua Majlis al Jinn any Oman
Ity lava-bato ity dia miorina eo amin'ny Plateau Selma, any amin'ny faritra lavitra any Oman izay tsy dia maro ny olona tonga. Tsy isalasalana fa tsy maintsy mikasa hanao tanjona fotsiny ianao amin'ny fikasana hahita ity lava-bato ity, izay amin'ny alàlan'ny volony no mety ho efitrano lava-bato lehibe indrindra eto an-tany. Midika ny anaranao 'toeram-pivoriana genius'. Io no fahasivy lehibe indrindra eto an-tany raha tsy etỳ ambonin'ny tany ihany no refesintsika.
Lava-bato Skocjan any Slovenia
Ireo lava-bato ireo no hany toerana ao Slovenia izay nambara Lovan'ny zanak'olombelona avy amin'ny unesco, Ka io no vatosoa amin'ny satro-boninahitra. An-tapitrisany taona izy ireo ary nonina nandritra ny prehistory, noho izany dia tena sarobidy tokoa izy ireo. Iray amin'ireo toerana manaitra indrindra ny tetezana ambonin'ny Reka, izay mampahatsiahy antsika an'io seho io avy amin'ny 'The Lord of the Rings' izay nanatrehan'i Gandalf an'i Balrog tany Moria. Fitsidihana lehibe tokoa ho an'ireo mpankafy ny trilogy.
Caverns Carlsbad any New Mexico
Ireo lava-bato ireo dia any Etazonia, ao amin'ny valan-javaboary iray any New Mexico. Manana ny valan-javaboary Lava-bato 117 fantatra izay ahafahanao mankafy ireo dia lavitra sy fitsidihana isan-karazany, miaraka amin'ireo habaka mahatalanjona misy stalactite sy stalagmites noforonin'ny rano latsaka. Ho fanampin'izay, tsy mikatona velively ity valan-javaboary ity, raha tsy amin'ny Andron'ny Noely, mba hahafahantsika mitsidika azy io isaky ny maniry isika.
Lava-bato Kverkfjöll any Islandy
Ny zohy any Islandy dia tsy mety ho zohy mahazatra, ary zohy misy ranomandry miforona noho ny hafanana geothermal. Izy io dia lava-bato any anaty ranomandry, izay efa niforona ao anaty glacier. Mahavariana ny sary, fa satria miovaova ny sehatra dia tokony handeha miaraka amin'ny olona mahalala lava-bato hatrany ianao.
Zohy fierena ao Mallorca
Ireo no lava-bato akaiky indrindra ananantsika, ary tsy misy ilain'izy ireo hitsiriritra ny velaran-tany ambanin'ny tany efa hitantsika. Any Porto Cristo, ao Mallorca, no misy azy ireo. Ho fanampin'izany, io lava-bato io dia ao anatin'ny iray amin'ireo farihy ambanin'ny tany lehibe indrindra eto an-tany, Farihy Martel. Afaka mandeha mitaingina sambo ao anaty lava-bato ianao, ary mihaino kaonseritra, zavatra mahaliana, satria mazàna dia manana akustika mahatalanjona ireo lava-bato.
Zohy Khao Bin any Thailand
Raha nieritreritra an'izany isika Tailandia ny zava-drehetra tsara tarehy dia teo amoron-dranomasina sy tamin'ny endriny ivelany, tokony ho fantatsika ihany koa fa misy lava-bato toa an'i Khao Bin. 20 kilometatra monja avy eo amin'ny tanànan'i Ratchaburi ireo, ary ao amin'izy ireo no ahitantsika ireo fiorenan'ny vatobe mampiavaka azy indrindra amin'ireo vatolampy, misy stalactite sy stalagmites.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny tontolo ambanin'ny tany tsara indrindra 10 eto an-tany
Ny zavatra jerena ao Bucharest, renivohitr'i Romania